ဒီလို website တွေရှိတယ်….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒီလို website တွေရှိတယ်…..
ဒီလို website တွေရှိတယ်…..
Posted by rat on Nov 28, 2011 in Copy/Paste | 18 comments
ကျတော်ရေးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ် မစစ်စမ်းသပ်နည်းမှာ ကျတော်ဘာသာမပြန်ခင် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီး တစ်ယောက်ပြန်ဖူးပါတယ်………. ကျတော်က ဘုရားလို့ပြန်ထားတဲ့နေရာမှာ ထာဝရတည်ရှိတဲ့ ဘုရားလို့ ဘာသာပြန်ထားပါတယ်…..
ကျတော်ပြောတဲ့ဘုရားနဲ့ ထာဝရတည်ရှိတဲ့ ဘုရားနဲ့ မတူဘူးဟုစောဒကတတ်ပါတယ်….. ဒါကြောင့်ကျတော်ဘက်က မှန်ကန်ရှင်းလင်းကြောင်း သက်သေပြရတော့မယ်….. ကျတော်အရင်ဆုံး မေးခွန်းနည်းနည်းလောက် ပြန်မေးချင်ပါတယ်…..
GOD က ထာဝရဘုရားလို့ ဘာသာပြန်ခဲ့ရင် မြန်မာလူမျိုးများသုံးသော ဘုရားကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လို ခေါ်ပါသလဲ ??????
ကျတော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများက ဖခင်ကို အဖေလို့ခေါ်တယ် အာရဗ်လို အရ်ဘ်(أب )လို့ ခေါ်တယ် အင်္ဂလိပ်က ဖာသား(သ်)(Father)လို့ ခေါ်တယ် ဂျာမနီက ဗက်တာ (Vater) လို့ခေါ်တယ် အိန္ဒိယကုလားက ပါးပါးလို့ခေါ်တယ် ဒါပေမဲ့ ဒါတွေအားလုံးဟာ ဖခင်ကို ညွှန်းဆိုခြင်းတွေပါပဲ…..
ရှာဖွေကျွေးမွေးမူ မပြုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တာနဲ့ ဖခင်လို့ မသတ်မှတ်ဘူးဟု ဆို၍ မရပါ….. ထာဝရမတည်၇ှိတာနဲ့ တည်ရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘဲ ကိုးကွယ်မူပြုခံရသည့်အရာတိုင်းကို ဘုရားလို့ ခေါ်ဆိုလို့ရပါတယ်….. (ဥပမာ – လူတစ်ယောက်က နွားကို ကိုးကွယ်ရင် နွားကဘုရား(God)ပါပဲ…..
အာရ်ဗ်ကမ္ဘာမှလူများနှင့် အနောက်တိုင်းသားများက ဘုရား(God) ရဲ့ရှိရမဲ့အရည်အသွေးများကို ဂုဏ်ဖော် ပြောကြတဲ့အခါမှာ ဘုရားသခင်ဆိုတာ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ရမယ် ထာဝရတည်တံ့ရမယ် မသေရဘူး……
ဒီလိုဂုဏ်များကို ဖော်ထုတ်ရေးသားကြတော့ ဂေါတာမက ဒီလိုဂုဏ်ဓာတ်တွေကို မပြည်စုံဘူးဖြစ်သွားတယ် သေတယ် ……ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ဘူး ………..ထာဝရလည်း မတည်တံ့ဘူး……. ဒီမှာ ဂေါတာမကို God အဖြစ်ခေါ်ဆိုဖို့ အယူတင်သွင်းခွင့် မရတော့ဘူး……….. ဂေါတာမကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဝန်ခံသွားခဲ့တယ်….. ဒါကြောင့် ဂေါတာမဟာ (God)ဘုရားမဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာသိခွင့်ရသွားခဲ့ပါပြီ……….
ကိုးကွယ်မူခံရသူတိုင်းကို ဘုရားလို့ခေါ်ဆိုလို့ရပါသည်။ ဒီအထဲမှ ထာဝရတည်တံ့လို့ ထာဝရဘုရားလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဟာ ဘုရား၏ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ရပ်သာဖြစ်ပါသည်။ ကိုးကွယ်တာနဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုမရောမိပါစေနဲ့ခင်ဗျာ။ (စကားချက်- အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည် ထာဝရတည်တံ့သော ဘုရားဖြစ်ပါသည်။ ကျတော်တို့သည် မူရင်းအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကွဲလွဲမူရှိမည်စိုးသောကြောင့် အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်လို့သာ မူရင်းအသံထွက်တိုင်းသာ ခေါ်ဆိုနေကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်ဟု ကျတော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ ဆိုပါတယ်……)
မြန်မာလို ဘုရားမှာ (၁) ဒေ၀ပုတ္တ မာရ် = မာရ်နတ်
(၂) ကိလေသမာရ် = ကိလေသာဆယ်ပါး
(၃) အဘိသင်္ခါရ မာရ် = ပြုပြင်စီရင်မှု
(၄)ခန္ဓမာရ် = ခန္ဓငါးပါး
(၅)မစ္စုမာန် = သေခြင်းတရား
လွတ်ကင်းအောင်နိုင်မှ ဘုရားလိုလည်း ပြောဆိုကြပြန်တယ်…..
(၁) လူတွေအားလုံးဟာ ဘုရားကို ဘာကြောင့် ကိုးကွယ်ကြပါသလဲ…..?
(၂) အောက်ကဟာကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ ကျတော်က ပေ၊ လက်မနဲ့တွက်လို့ ပေတံလို့ ခေါ်ပြီး အခြားလူတစ်ဦးက မီတာ၊ စင်တီမီတာနဲ့တွက်ပြီး ရူလား(ruler) လို့ခေါ်လိုက်လို့ ကျတော်ခေါ်တာ ပေတံဆိုတာ မှားပါတယ်လို့ ပြောလို့ရမလား ??????
င ကြွက် has written2post in this Website..
View all posts by rat →
ဒီရွာက အင်မတန်လစ်ဘရယ်ကျတယ် လွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုခွင့် ရှိတယ်… ဆိုပေမဲ့.. အဲဒီပေးထားတဲ့လင်ခ်လောက်ကြီး ရေးလို့ မဖြစ်သေးဘူးဗျ..။
အဲဒါကြောင့်… လင့်ခ်ပါတဲ့ ကောမန့်ဖျက်လိုက်ပါတယ်..။
အပေါ်က စာမှာလည်း.. ဂေါတမဗုဒ္ဓကို.. ဂေါတာမ လို့ရေးထားတဲ့အတွက်.. သတိပေးလိုပါတယ်..။
ရေးထားတဲ့ ကောမန့်တခုကလည်း.. ထာဝရဘုရားသခင်အကြောင်း ပြန်မေးခွန်းထုတ်ထားတာမှာ.. တခြားကိုးကွယ်ရာကို.. ထိခိုက်စေနိုင်တာတွေပါတဲ့အတွက်.. ဖျက်လိုက်ပါတယ်..။
တကယ်လို့.. ပညာရှင်ဆန်စွာစံနစ်တကျ ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်တော့.. အပေါ်ကစာတွေအတွက်..အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်..။
ဆွေးနွေးရင်း.. တခြား ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတခုခုကို.. ထိခိုက်စေတယ် ဖြစ်ရင်တော့.. စည်းကမ်းအတိုင်းသွားရပါလိမ့်မယ်..။
ဒီကလင်ခ်ကိုဖျက်လိုက်ပေမယ့် ဒယ်အိုးဆရာတော်ဖိုရမ်မှာ တင်ထားသေးတယ်။
သူကရိုင်းပေမယ့် ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာမို့ မေတ္တာနှင့်ပဲဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုကို လက်ခံပါတယ်။
ရှေးလူကြီးတွေက ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလို့လဲ မယုံလိုက်နှင့်။
မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နှင့် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ယုံကြည်လက်ခံပါလို့ဆုံးမထားပါတယ်။
ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနေတာ သူတပါးဘာသာကို ပုတ်ခတ်မှုလုံးဝမလုပ်ပါဘူး။
ဆဲရေးဖို့ဆိုစိတ်ကူးတောင်မရှိပါ။ ကိုကြွက်ကို မမြင်မှန်သိဖို့ မေတ္တာထားပြီးတော့ပဲဆွေးနွေးချင်တာပါ။
ဒီက admin က ပုတ်ခတ်တာကိုခွင့်ပြုပြီး ဝေဖန်တာကိုခွင့်မပြုရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယုံကြည်မှုနည်းတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ထင်တယ်။
ကျွန်တော်မေးထားတာ ရိုင်းစိုင်းမှုတစ်လုံးမှမပါပါ။ မေးခွန်းထုတ်ထားတာသက်သက်ပါ။
……This is what the Buddha taught: an art of living. He never established or taught any religion, any “ism”. He never instructed those who came to him to practice any rites or rituals, any empty formalities. Instead, he taught them just to observe nature as it is, by observing the reality inside. Out of ignorance we keep reacting in ways which harm ourselves and others. But when wisdom arises—the wisdom of observing reality as it is—this habit of reacting falls away. When we cease to react blindly, then we are capable of real action—action proceeding fromabalanced mind,amind which sees and understands the truth. Such action can only be positive, creative, helpful to ourselves and to others. ………
…….It can be practiced by one and all. Everyone faces the problem of suffering. It isauniversal malady which requiresauniversal remedy, notasectarian one. When one suffers from anger, it’s not Buddhist anger, Hindu anger, or Christian anger. Anger is anger. When one becomes agitated asaresult of this anger, this agitation is not Christian, or Jewish, or Muslim. The malady is universal. The remedy must also be universal. The remedy was found and taught by Buddha…..The One so called the God can’t teach such kind of truth.
ဒီလို စာအုပ်မျိုးတွေလည်း ဖတ်သင့်တယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လေ့လာစရာ အများအပြားနဲ့ မှတ်သားစရာတွေ အများကြီးကျန်နေသေးတဲ့အတွက် ဖတ်မှတ်သွားပါမယ်။
မဖိတ်ပဲ လာတဲ့ ကြွက်စုပ်
“”ဒီလိုဂုဏ်များကို ဖော်ထုတ်ရေးသားကြတော့ ဂေါတာမက ဒီလိုဂုဏ်ဓာတ်တွေကို မပြည်စုံဘူးဖြစ်သွားတယ် သေတယ် ……ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ဘူး ………..ထာဝရလည်း မတည်တံ့ဘူး……. ဒီမှာ ဂေါတာမကို God အဖြစ်ခေါ်ဆိုဖို့ အယူတင်သွင်းခွင့် မရတော့ဘူး……….. ဂေါတာမကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဝန်ခံသွားခဲ့တယ်….. ဒါကြောင့် ဂေါတာမဟာ (God)ဘုရားမဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာသိခွင့်ရသွားခဲ့ပါပြီ……….””
အထက်ကစာသားတွေမှာသဘောထားကွဲလွဲကြတာနေမှာပါ ငကြွက်ရေ။အဲဒီတော့ ကိုယ့်လူပြောတဲ့အဆိုကို ကျနော်ကတော့
လက်ခံပါတယ်။အောက်ကလင့်မှာ မြတ်ဗုဒ္ဓပေါ် အမြင်ကိုတွေ့ ရမှာပါ။လေ့လာကြည့်ပါခင်များ။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဲ မိရိုးဖလာထက် ဗုဒ္ဒဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ ။ ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးရတာ ကျွန်တော်တို.ဆီမှာ အဆင်မပြေလို. ကျွန်တော် အဲဒီ့ website ကစာသားတချို.ကို copy/paste လုပ်လိုက်ရတာပါ ။ ကျွန်တော်လဲအဲဒီ့ website ကိုသိတာမကြာသေးပါဘူး ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အဲဒီ့ website ကိုဖန်တီးတဲ့ကောင် နိုင်ငံရေးသမား ကွန်မြူနစ်လိုလို ၊ မူဆလင်လိုလို နဲ. အသိဥာဏ်နည်းပါးတဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တချို.ကို အမြင်တိမ်းစောင်းအောင် ၊ အကြည်ညိုမဲ့အောင်လုပ်နေတာလို. ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်ကအဲလို website တွေရှိတယ်ဆိုတာ သိအောင်လို.ပြောချင်တာပါ ။ အဲဒီ့လင့်ကိုသိပြီး ၀င်ကြည့်တဲ့တွေဆိုရင် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တိုင်း ဒေါသမထွက်ရင် ကျွန်တော့်ကိုကြိုက်သလိုပြောပါ ။ မယုံရင် အဲဒီ့ website ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါ ။ အဲဒီ့ကောင် အဲလိုမိုက်ရိုင်းပြီး စော်ကားနေတာကို ဒီအတိုင်းကြည့်မနေသင့်ပါဘူး ။ အသိဥာဏ်မြင့်မားပြီး နည်းပညာတတ်ကျွမ်းတဲ့သူတွေရဲ. အကူအညီအများကြီးလိုပါတယ် ။ အခုလို ကျွန်တော့်ကို မေတ္တာဝိုင်းပို.ကြတာသိရရင်ဖြင့် ကျွန်တော်ပိုစ့်တင်ရကျိုးတပ်ပါပြီဗျာ……..အခုလိုဆွေးနွေးပေးကြတာကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
Rat ရေ ညီလေးရဲ့ ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်တော့ ညီလေသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်ဘို့ အစော်တောင်မနံသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိမိကိုယ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်လို့ ပြောလည်း ဘယ်သူကမှ လာပြီးတားလို့မရပါဘူး။ ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်း များစွာရှိပါတယ်။ အများပြောနေတဲ့ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာသည်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဟု အမည်ခံ(သို့) မှတ်ပုံတင်ထဲမှ ဗုဒ္ဓဘာသာမျှ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဗုဒ္ဓကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဆီက ဘာမျှလိုချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုတည်းပါပဲ။ အဲဒါ တရားပဲ။ ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာကိုက မွေးမွေးချင်းကလေး မှ အသက်(၃၅)နှစ်ထိအရွယ်ကို ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘုရားမှာ အဖေ၊ အမေမရှိဘူးလို့ ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ နားမရှုတ်ပါနဲ့။ သူ့ အဖေနဲ့အမေက ဗုဒ္ဓဘုရားလေး မွေးပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ သာမန်ကလေးလေးပါပဲ၊ ဒီကလေးအရွယ်ရောက်ပြီး (၃၅)နှစ်နောက်ပိုင်း မှန်ကန်သော မဂ္ဂင်(လမ်းစဉ်)၈ပါးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတဲ့အဖြစ်ကို ဘုရားလို့ခေါ်တာပါ။ ဒီလမ်းစဉ်(၈)ပါးသည် အခြားသော ဆရာအကူအညီမပါ၊ ယခင်ကလည်း မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မျှ မဖော်ထုတ်မသိရှိသောကြောင့် ဒီ မဂ္ဂင်(၈)ပါးကို ဖော်ဆောင်ပြီး ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းသူကိုယ်တိုင်ပါ ကျင့်သုံးနေထိုင်သူကို ဘဂ၀ါ တထာကတလို့ ယခင်က ခေါ်ဆိုပြီး နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂံခေတ်မှစပြီး (ပုရရှား၊ ပုရှား၊ မှ ဘုရား) မြန်မာအနက်(ခေါင်းဆောင်)လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဘုရားသခင်လို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတာကလဲ မြန်မာတွေက သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့သူကို ဘုရားလို့ ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရောက်လာတဲ့ ခရစ်ယန်၊ အစ္စလန် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ဘုရားသခင်လို့ ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုလာကြတာပါ။
(God) ကို ဘုရားသခင်လို့ပြောတာကတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် ကတော့ မြန်မာလို ဘုရား၊ အင်္ဂလိပ်လို Buddish လို့သုံးလည်း ရပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ အပြစ်ပြောလို့မရပါဘူး။
လူတိုင်းက ဂေါတမဘုရားရှင်၊အလာအရှင်မြတ်၊သခင်ရေရှု လို့ခေါ်တာဆိုတော့ ဘုရားလို့အခေါ်ခံရတာက ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင် တစ်ဦးတည်းသာ ရှိပါတယ်။ အလာဘုရား၊ရေရှုဘုရား ဆိုပြီးဘယ်သူက ခေါ်လို့လဲ…အဲဒါဆိုရင်…ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားက ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်သွားတဲ့နေရာက အခုချိန်ထိ နီပေါ မှာရှိတယ်။ အလာအရှင် ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်သွားတဲ့နေရာက ဘယ်နေရာမှာလဲမသိဘူးနော်…နောက်ပြီး သခင်ရေရှုကောပဲ ဘယ်နေရာမှာ ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံ အားထုတ်သွားတာလဲမသိဘူးနော်…သူတို့သုံးဦးလုံးက လူအဖြစ်ကနေ ကျင့်ကြံအားထုတ်သွားကြတာချည်းပဲမဟုတ်ဘူးလား….
ဘာမှမသိရင်လဲ ကိုယ့်ရဲ.ကိုးကွယ်ရာကို အေးအေးဆေးဆေး မိရိုးဖလာကိုးကွယ်ပါစေဗျာ..
အဲဒီ website တွေမှာ ဘယ်လိုပဲရေးရေး ဒေါသထွက်စရာတော့ အကြောင်းမရှိပါဘူး… သူဘယ်လောက်ပဲပြောပြော ကျွန်တော်တို. ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေက သူများပြောလို. ကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်ကိုတိုင် ကျင့်ကိုယ်ကိုတိုင်သိပြီး ကိုးကွယ်နေကြတာပါ… စိတ်ဆိုးစရာလဲ မလိုသလို. ဂရုစိုက်စရာလဲမလိုပါဘူး….
ဥာဏ်မမှီတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ကျွန်တော်တို.ဘာသာမှာ နေရာမရှိပါဘူး
Mr.rat ရေ ရိုင်းသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ ဒီဥပမာလေးကထိရောက်တယ်
ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်တော်များကို ကြည့်မှသာ ဗုဒ္ဓနဲ့ ဖန်ဆင်းရှင် ကွာဟချက်ကို မြင်နိုင်ပါသည်။ ကျန်တဲ့ ဘုန်းတော်ဘွဲ့များကတော့ လူတိုင်းစိတ်ထဲ ကိုယ့်ဘုရား ကိုယ်ကြံမိရာ ပြောနိုင်လို့ ကွဲပြားစွာမြင်ရန်ခက်ပါမည်။ အဲသလို သိနိုင်ရန်လည်း ဝိပဿနာအကျင့်နှင့် နီးစပ်ပါမှ ဖြစ်ပါမည်။ နို့မို့ပါက ရွာထဲမှ အဓမ္မဝါဒီ သဂျီးတို့အုပ်စု ပြောလေ့ရှိသလို ဗုဒ္ဓဘုရားဟော ဖြစ်ပျက်သစ္စာကမ္မဌာန်းသည်လည်း ရှေးဟောင်းအိန္ဒိယကျင့်စဉ် ကမ္မဌာန်းများနဲ့ အတူတူ ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ သူတို့က ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်နေတာကိုပဲ မြင်တာကို။ သတိပဌာန်အကျင့်ရှိသူ သဂျီးတောင် သမထနဲ့ ဝိပဿနာမကွဲတာမို့ ဝိပဿနာအကျင့်နှင့်နီးစပ်ပါလျင်လည်း မှန်ကန်သော အကျင့်ဖြစ်ရန်လိုပါသေး၏။။။။။။။။။
ပြဒါးတလမ်း သံတတလမ်း … ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ ကိုယ် ယုံကြည်ရာ ကိုးကွ ယ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ … စောင်းမြောင်း ခိုင်းနှိုင်းစရာမလိုတဲ့ဟာကို လာနှိုင်းနေတာကတော့ … နည်းနည်းဂေါက်နေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ် …
စည်းကမ်းချက် ၇ ကိုဖတ်လိုက်
ဗမာ အများစု က ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေ….
ဘာသာရေး မဟုတ်…. လာစော်ကားနေတာလို့ပဲမြင်တယ်…..
အဲသည် ဆိုက် ကို ရောက်သွားမိလို့ တစ်နေကုန် နေလို့မကောင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်…..
ဖတ်ကြည့်ရင် ကုလား မွတ်စ် တွေ ဆိုတာ သိသာပါတယ်….
ဂေါတမ ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်…. အလ္လာ ပဲဖြစ်ဖြစ်…. ယေရှု့ ပဲဖြစ်ဖြစ်…..
သူတို့ဟာ Grate Philosopher တွေဆိုတာ ငြင်းလို့ မရဘူး…. သူတို့ရဲ့ အယူအဆ တွေ ယနေ့တိုင် ရှိနေတာ၊ ယုံကြည် သက်ဝင်သူတွေ အများအပြား ရှိနေတာ ကိုကြည့်ရင်ပဲ သိနိုင်တယ်….
အကြမ်းဖက် တွေများလွန်းလို့ မွတ်စ်လင်ဘာသာ ကို သံသယ ၀င်နေတာ…… ခုတော့ သူတို့ကပဲ လုပ်ပြန်ပြီ..